Cristiano Ronaldo Iyo Qoyskiisa Oo Ka Degay Waddanka Spain, Sababta Iyo Wakhtiga Ay Uga Gudbayaan Italy – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaCristiano Ronaldo Iyo Qoyskiisa Oo Ka Degay Waddanka Spain, Sababta Iyo Wakhtiga Ay Uga Gudbayaan Italy
Cristiano Ronaldo Iyo Qoyskiisa Oo Ka Degay Waddanka Spain, Sababta Iyo Wakhtiga Ay Uga Gudbayaan Italy
Cristiano Ronaldo iyo qoyskiisa ayaa soo dhamaystay fasixii ay ku joogeen dalka Greece waxayna dib ugu soo laabteen magaalada caasimada dalka Spain ee Madrid. Ronaldo oo dhawaan heshiis afar sano ah la gaadhay kooxda Juventus ayaa Madrid ugu soo laabtay sidii uu u macasalaamayn lahaa kooxdiisii hore ee Real Madrid oo uu ku soo qaatay sagaal sanadood oo dahabi ahaa iyo waliba sidii uu kulan ula sii qaadan lahaa asxaabtiisa gaarka ah.
Cristaino Ronaldo iyo qoyskiisa ayaa dalka Giriiga fasax ku joogay tan iyo markii uu ka soo laabtay koobka aduunka ee Russia kadib markii xulka qarankiisa Portugal lagu soo reebay wareegii 16ka xul ee ay Uruguay wada ciyaareen, wuxuuna isaga oo dalka Giriiga jooga uu ku biiray Juventus.
Cristiano Ronaldo iyo qoyskiisa ayaa Madrid soo gaadhay fiidkii xalay isaga oo macasalaamayn doona kooxdii uu koob kasta kula soo guulaystay ee Real Madrid isla markaana si buuxda uga diyaar garoobi doona gurigiisa Madrid halkaas oo uu sagaal sano ku soo noolaa isla markaana uu hadda shandadaha ka xidh xidhan doono.
Cristiano Ronaldo iyo qoyskiisa ayaa si toos ah uga soo duulay garoonka diyaaradaha Kalamata Airport ee dalka Greece waxayna ka soo degeen garoonka Madrid ku yaale ee Madrid-Barajas. Ronlado iyo qoyskiisa ayaa inta ay Madrid joogaan waxay ka shaqayn doonaan danihii kaga xidhmaan Madrid maadaama oo ay waqti dheer ku soo noolaayeen.
Marka uu Cristiano Ronaldo dhamaysto macasalaamaynta iyo hawlaha qoyskiisa ee Madrid kaga xidhan waxa uu u duuli doonaa magaalada Turin halkaas oo ay kooxda Juventus saxaafada ugu soo bandhigi doonto isla markaana uu si rasmi ah uga soo hormuuqan doono Old Lady.
Kooxda Juventus ayaa go’aansatay in ayna Cristiano Ronaldo u samayn bandhig saxaafadeed oo gaar ah waxayna ku sii dhegsanaatay sharciga soo bandhigsta ciyaartoyda cusub ee kooxdeeda oo ah in ayna samayn ka badbadin sidii markii hore laga filayay.
Juventus ayaa galabnimada Isniinta Cristiano Ronaldo saxaafada u soo bandhigi doonta iyada oo waliba aan samayn doonin wax ka duwan qabakii ay saxaafada ugu soo bandhigi jirtay ciyaartoyda cusub wuxuuna Ronaldo war saxaafadeedkiisa Juventus qaban doonaa isniinta July 16, marka ay saacada Talyaanigu tahay 18:30 ka galanimo.
Wargayska AS ee Madrid ka soo baxay oo xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo iyo qoyskiisu ay soo gaadheen caasimada Madird ayaa sheegay in xidiga ree Portugal uu isniinta mari doono tijaabada caafimaadka Juventus inkasta oo markii hore la shaaciyay in uu Munich ku maray.
Si kastaba ha ahaatee, Cristiano Ronaldo ayaa haysta waqti kooban oo uu asxaabtiisii iyo kooxdiisii hore ee Real Madrid uu ku macaslaameeyo ka hor inta aanu Turin u duulin ee aanu Juventus si rasmi ah ula midoobin.